UKhumalo ufuna ukuvala iComrades ngegolide
LAPHA ingqwele yomgijimi waseNanda, uProdigal Khumalo, ithathwe nomdlali wetriatlone waseThekwini uZisandele Mkhize abazoyibamba naye kwiMrPrice Foundation Challenge emelwe nguDylan Cherry owengamele ezokumakethwa Isithombe: SITHUNYELWE/PIERRE TOSTEE
Malibongwe Mdletshe | November 17, 2020
UKUBHEDUKA kwe-coronavirus akugcinanga ngokuletha inkemane kuhlehliswa imidlalo kubadlali bezemidlalo enhlobonhlobo kodwa kumsubathi wamabanga amade waseThekwini, uProdigal Khumalo, kuphazamise nezinhlelo zokugaxa emgibeni amateku akhe.
UKhumalo (38), ozinze eMatikwe, eNanda, eThekwini usehlele ukuwagaxa emgibeni kodwa ufisa ukuzama igolide lesithathu leComrades ngehlandla lokugcina.
Eyokuwagaxa emgibeni uKhumalo uyiveze exoxa neSolezwe ngeSonto ngamalungiselelo okusubatha u-21K ongomunye wemijaho yeMR Price Foundation Challenge.
Lo mjaho ezogijinywa ngabasubathi nabashovi bamabhayisikili ngoDisemba 5 kuya kumhlaka-6.
Nomphakathi uvulelekile ukungenela imijaho ehlukene: Ezamabhayisikili - 10km / 45km / 90km / 303km ngisho-606km kuthi ezejubane - 3km, 7km no-21km.
"Yimiqhudelwano efana nale (esingathwa ngobuchwepheshe) esisiza ukuthi siqhubeke nempilo. Seside isikhathi singagijimi mijaho kodwa silokhu sizilolonga. Uyazi-ke ukuthi kuyakhathaza ukulokhu ujimile kodwa kungekho umjaho owugijimayo. Siyakuthakasela kakhulu singabasubathi ukuthi kube khona nemijaho efana nale yezobuchwepheshe. Okuhle kakhulu ngalo mjaho wakithi ngowokuqoqa imali yokunikela emphakathini," kusho uKhumalo.
Uthe usezowagaxa emgibeni bese egxila enkuliseni yakhe ayisungule ngemali ayithola edayisa imoto ayinqoba kwiZululand Marathon ng-2017.
"Inkulisa i-Ochres Academy iseNanda. Inanda akusiyo indawo ephephile. Ngihlezi ngisho ukuthi inkinga akusiyo indawo kodwa ngabantu. Kusuka ngonyaka ozayo ngizozibambela ngokugcwele enkulisa. Sivele sesinabo abasubathi abenza kahle njengalo mlisa uNkosikhona Mohlakoana, ophume endaweni ka-11 eqala ukugijima iComrades waphida waphuma isibili kwiCape Town Marathon," kusho uKhumalo, odabuka KwaBulawayo, eZimbabwe.
Ezintweni asezizuzile uKhumalo nazohlezi ezikhumbula ubale amagoli amabili eComrades.
"Emiqhudelwaneni emikhulu nezinto engizizuzile ezizohlezi zisenhlizweni yami, wukuthola igolide kwiComrades Marathon. Ngeke ngikulibale nokuqopha irekhodi kwi-Ultra Trail Cape Town engu-100km. Ngazimangaza nami kulowo mjaho," kusho uKhumalo.
"Omunye umjaho onendawo yekhethelo enhlizweni yami, yiZululand Marathon. Ngiyinqobe ngo-2017 kunganqotshwa imali kodwa bekuhlatshanwa ngemoto. Ukhethekile kakhulu lowo mqhudelwano kimi. Yiyo leyo yomithathu imiqhudelwano engiyohlale ngiyibeke eqhulwini uma ngikhumbula izinsuku zami kwezokusubatha."
UDylan Cherry owengamele ezokumakethwa eMrPrice Foundation uthe kungenelwa ngobuchwepheshe kule website: www.mrpricefoundationchallenge.org
UZulu usethole ikhaya elisha kuMaZulu